प्लस टु पुस्तामा तीजको ग्ल्यामर - तीज बिशेष - साप्ताहिक
- शिव मुखिया
भाद्र २५, २०७२
तीज किन मनाउने ? प्लस टु जेनरेसनसँग यसको रेडिमेड जवाफ छ–‘रमाइलो गर्न ।’ यसलाई उनीहरूले साथीसंगी भेटघाट गर्ने, नाचगान गर्ने, खुसी साट्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गरेका छन् । तीजको सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ तर उनीहरूलाई यसले भन्दा पनि फेसनमय तीजको ग्ल्यामरले तान्छ ।
तीज यस्तो पर्व हो, जसमा पहिरन, शृंगार तथा गरगहनाले खास महत्व राख्छ । हरियो, रातो र पहेंलो रंगको पहिरन लगाइने फेसन डिजाइनर समा वानो बताउँछिन् । ‘यो फेसनमय चाड हो,’ समा भन्छिन्– ‘त्यसले युवापुस्तामा यसको छुटै ग्ल्यामर छ ।’
तीजमा रातो तथा हरियो रंगको कुर्ता–सुरुवाल एवं लेहेंगा बढी लगाइन्छ । यस्तै गेटअपमा रातो, हरियो चुरा, टीका लगाइन्छ । मेकअपमा पनि रातोकै वर्चस्व रहन्छ– रातो लिपिस्टिक, रातो नेलपोलिस अनि रातै धागो र टीका । तीजको यो छुट्टै फेसन शैलीले प्लस टु जेनरेसनलाई पनि तान्ने गरेको छ । ‘प्राय: अरू बेला यस्तो ड्रेसअप गर्ने मौका जुर्दैन’ सम्पदा श्रेष्ठ भन्छिन्– ‘त्यसैले तीज हाम्रा लागि विशेष हुने गरेको छ ।’
कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा अध्ययनरत सम्पदा तीजलाई रमाइलो जमघटको अपूर्व अवसर मान्छिन् । अरू समयमा उनलाई पढाइ, होमवर्क आदिले बेफुर्सदिलो बनाउँछ । ‘तीजमा सबै तनाव बिर्संदै रमाइलो गर्ने हो,’ सम्पदा भन्छिन्– ‘त्यसले मुड फ्रेस गराउँछ ।’
अहिलेको पुस्तामा धार्मिक वा साम्प्रदायिक संकीर्णता हराउँदै गएको छ । जुनसुकै जात, क्षेत्र, धर्म भए पनि उनीहरू चाडपर्वप्रति उदार बन्दै गएका छन् । किनभने यो पुस्ता समग्र जीवनलाई उत्सवमय बनाउन चाहन्छ । त्यसैले त हरेक पर्व उत्तिकै ‘सौहार्दपूर्ण र हार्दिकतासाथ सेलिब्रेट गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच राख्छ ।
साङ्डोमा शेर्पा भन्छिन्– ‘मलाई तीज त ल्होसार जत्तिकै रमाइलो लाग्छ । सांगीतिक ब्यान्ड ‘गोर्खालिज गल्र्स’ की सदस्य हुन्— साङ्डोमा, जसको घरमा तीजले प्रवेश पाउँदैन । यद्यपि उनी भने धूमधामका साथ यो पर्व मनाउँछिन् । साङ्डोमा साथीको घरमा गएर दर खाने, नाचगान गर्ने बताउँछिन् । जसरी उनी साथीकहाँ तीज मनाउँछिन्, ल्होसारमा उसैगरी साथीहरूलाई आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गर्छिन् ।
विधाइका कोइराला तीजमा दर खाने, नाचगान गर्ने तथा मन्दिर जाने योजनामा छिन् । उनलाई तीजको रमाइलो पक्ष भनेकै उन्मुक्त मनोरञ्जन लिन पाउनु हो भन्ने लाग्छ । ‘सबैको अनुहारमा खुसी, हाँसो देख्न पाइन्छ,’ विधाइका भन्छिन्– ‘यो नै तीजको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।’
तीजको आफ्नै सामाजिक महत्त्व छ । चेली–माइतीबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने अवसर हो— तीज । यतिबेला पराईघर गएका चेलीबेटीलाई माइतीमा हार्दिकतापूर्वक निमन्त्रणा गरिन्छ र मीठो–मसिनो ख्वाइन्छ । यो पर्वले श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन पनि उत्तिकै भूमिका खेलेको छ । यतिबेला विवाहित महिलाहरू आफ्ना श्रीमान्को दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्छन्, पूजाआजा गर्छन् । त्यसो त व्रत बस्ने, पूजाआजा गर्ने, मन्दिर धाउने लस्करमा विवाहित मात्र हुँदैनन्, अविवाहित पनि सराबरी देखिन्छन् । किन त ? विधाइका संक्षिप्तमा भन्छिन्– ‘हुनेवाला श्रीमान राम्रो होस् भनेर ।’
तीजलाई अहिलेको पुस्ताले पूरै मोडिफाइ गरिरहेको टिप्पणी गर्छिन्— ज्योति दाहाल । ‘तीज फेसनजस्तो भएको छ,’ ज्योति भन्छिन्– ‘यसलाई परम्परागत मान्यताभन्दा फरक ढंगले मनाउन थालिएको छ ।’ पार्टी प्यालेस, रेस्टुराँमा जाने, चर्को ध्वनिमा हिन्दी/अंग्रेजी गीत घन्काउने अनि मदिरा पिउँदै मस्त डान्स गर्ने परिपाटीको विकास हँुदै गएको ज्योतिले बताइन् । ‘मलाई त यो शैली मन पर्दैन,’ ज्योति भन्छिन्– ‘यसले चाडको वास्तविक मर्म ओझेलमा पार्छ ।’ तीजलाई यसको महिमा बुझेर विधिपूवर्क मनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
पार्वतीले महादेव वर पाउन निराहार व्रत बसेको पौराणिक कथनसँगै तीजको परम्परा जोडिएको छ । यद्यपि रसिना श्रेष्ठ व्रत बस्दैमा भावी श्रीमान् असल हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दिनन् । ‘यो एउटा आस्था हुन सक्छ,’ रसिना भन्छिन्– ‘तर अन्नपानी नखाई व्रत बसेकै भरमा राम्रो श्रीमान् पाइँदैन ।’
अहिले व्रतलाई पनि फेसनकै रूपमा अनुसरण गरिएको रसिनाको बुझाइ छ । ‘व्रतको अर्थ बुझेर भन्दा पनि देखासेखीमा गरिरहेको जस्तो लाग्छ,’ रसिना भन्छिन् । आखिर जुनसुकै मनोकांक्षा बोकेर व्रत बसे पनि त्यसले स्वस्थ्यमा फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । ‘यो फास्टिङ नै त हो,’ रसिना भन्छिन्– ‘यसले पाचन यन्त्रलाई सुचारु बनाउन सहयोग गर्छ ।’
प्रकाशित :भाद्र २५, २०७२
आयुषा भइन् मिस प्लस टु–२०१५
तीनपुस्ते तीज भाद्र २५, २०७५
अमेरिकामा तीज यसरी मनाइन्छ भाद्र २५, २०७५
हङकङमा तीजको रौनक भाद्र २५, २०७५
युट्युबमा हिट तीज गीत भाद्र २५, २०७५
तीज गीतमा हास्य कलाकारको भीड भाद्र २४, २०७५
तीजका पहिरन भाद्र २४, २०७५
घरमै दर भाद्र २४, २०७५
तीजको पूजा विधि भाद्र २३, २०७५
दरका बारेमा जानकारी भाद्र २३, २०७५